Podcasts @PodcastMovement တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ Podcasts တိုးတက်ကြီးပွားနိုင်သလား - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အသားပေး » Podcasts @PodcastMovement တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ Podcasts တိုးတက်ကြီးပွားနိုင်သလား
Podcasts @PodcastMovement တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ Podcasts တိုးတက်ကြီးပွားနိုင်သလား
စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကငါးနှစ်မှာတော့ podcasts လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ အမျိုးမျိုးသောနောက်ခံ၏ podcast များအတွက်အဆုံးစွန်နှစ်ပတ်လည် destination သို့ဖြစ်လာရန်ကြီးထွားလာအတွက်ကောင်းစွာပြုတော်မူပြီ။ Podcasts လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့လည်းအသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေ Podcasts မှထူးခြားသောပညာရေးနှင့်ကွန်ရက်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ Podcast တခုကိုကြီးထွားဖို့ကြိုးစားနေခြင်းသို့မဟုတ်တဦးတည်းစတင်ဖြစ်စဉ်၌တည်ရှိ၏, တက်ရောက်ပြီးကြောင်းလုပ်ဖို့နိုင်ပါလိမ့်မည်သူမဆို podcast Podcasts လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ 2019, (PM19) ။ PM19 အားလုံးအနုပညာနောက်ခံ၏ podcast စုစည်းအတွက်အန္တိမပူအစက်အပြောက်အဖြစ်သြဂုတ်လ 13-16 ဖြစ်ဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ပညာနှင့်အခြေခံအားဖြင့် Podcast တခုကိုစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးထွားကူညီရန်ထူးခြားတဲ့အားထုတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်အံ့သောငှါစည်းဝေးအဖြစ်ဤသည်ကြီးကျယ်သောဖြစ်ရပ်သည် Podcast တခုကိုအသိုင်းအဝိုင်းကျော် 4,000 အဖွဲ့ဝင်များမှာစုစုပေါင်းတက်ကြွစွာနဲ့အယောင်ဆောင် Podcasts, စက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် podcasting ပညာရှင်များထံမှအထိမည် ဒါကြောင့်အနုပညာမတူကွဲပြားမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုယူနီဖောင်းဆိပ်အောင်သောများစွာသောအသံ။
Podcasts လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့သူတို့ PM19 တက်ရောက်ရန်အဖြစ်အားလုံးဘာသာရပ်များနှင့်နောက်ခံ၏ podcast ရဖို့ရန်အဘို့အရာတစ်ခုခုရှိလိမ့်မည်သေချာအောင်မကြိုးစားအားထုတ်မှုနှမြောခဲ့သည်။ ဤသည်ကြီးကျယ်သော podcasting ဖြစ်ရပ်မှာကျင်းပပါလိမ့်မည် ရိုအခါရေယုံ Creek အဘိဓါန် Podcasts အားလုံး 300 ကွဲပြားခြားနားသော breakout အစည်းအဝေးများခုနစ်ခွဲခြားများထဲမှအောက်မှာလဲကြလိမ့်မည်ဟု panel ကဆွေးနွေးမှုများကျော်ပါဝင်, 150 ကျော်စပီကာများနှင့်ဟောပြောဖို့ပြည့်စုံရရှိမှုနှင့်အတူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာ Orlando တွင်ဖလော်ရီဒါမှာ "အပုဒ်။ " ဒီ ခုနစျပါးညီလာခံပုဒ် ၏အကြောင်းအရာများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်:
လူ့အဖှဲ့အစညျးသ, ယဉ်ကျေးမှု & Advocacy
အသံ Drama / Fiction
တို့ကကမကထပြု ဟိမဝန္တာနှင့်ကဲ့သို့သောအစည်းအဝေးများ ထွက်. featuring:
podcasting အခြေခံ 1 - အဆိုပါကို Creative ဘေးထွက်
မဟာနှစ်မိနစ် - နားထောင်ခန့်ကပ်ထားပါကတစ်ဦးကိုရှင်းလင်းရန် Podcasts ဖွင့်ပွဲ Creating
Podcasts ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် Make အဆိုပါထိပ်တန်း 10 အင်တာဗျူးအမှား
အဆိုပါဖန်တီးမှုလမ်းကြောင်း Podcasts အဆိုပါ podcasting စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါငျးတို့သ ins နှင့်တနေရာသင်ပေးကူညီဖို့လုပ်ဆောင်နေအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းမတက်ရောက်အစပြုသူနှင့်ကြေးစား Podcasts ကူညီပေးပါမည်သူတို့ Podcast တခုကိုကြီးမြတ်အင်တာဗျူးလုပ်ဆောင်သွားရန်နိုင်စွမ်းအတူထွက်မတ်တပ်ရပ်စေရန်လိုအပ်ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏အနုပညာအတွက် immersive ဖြစ်လာသကဲ့သို့, သူတို့သည်မိမိရှိုးကြီးထွားကူညီဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ။
တို့ကကမကထပြု podcast အင်ဂျင်နီယာကျောင်းနှင့်ကဲ့သို့သောအစည်းအဝေးများအပါအဝင်:
အဆင့်မြင့်အသံထုတ်လုပ်မှု: Waaay ကျော်လွန်. ရုံ Umms, etc ဖယ်ရှားခြင်း
ပြည်သူ့ Breathe: တစ်ဦးနှင့်အင်တာဗျူးတည်းဖြတ်ခြင်း၏အနုပညာ
နည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းကနေအစည်းအဝေးများအညီအမျှ podcasting လောကီသားတို့သည်အနေဖြင့်အကောင်းဆုံးနည်းပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်သူများသူတို့ content တွေကိုပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြည့်ရှုစေပါလိမ့်မယ်သည်ဟုထူးခြားသောတည်းဖြတ်ရေးနည်းစနစ်သင်ပေးရှိခြင်းစဉ်အထူးသ, podcasts မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှ Podcasts ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကူညီရန်ဒီဇိုင်းမြောက်မြားစွာသည့်အကြောင်းအရာများထည့်သွင်းဖို့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် နှင့်ခေတ်မီ။
တို့ကကမကထပြု Coleman Insightsယင်းစက်မှုလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းကဲ့သို့သောအစည်းအဝေးများမည်ဖြစ်သည်:
Podcasts Advertising ကြော်ငြာ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
တိုက်ရိုက် Tour Panel ကို
ကမ္ဘာ့ရန် podcasts များဆောင်ခဲ့
ဤရွေ့ကားအစည်းအဝေးများ Podcast တခုကိုကြော်ငြာ, တိုင်းတာနှင့်ကြီးမားသော Podcast တခုကိုပံ့ပိုးကူညီခြင်းကိုများ၏စံချိန်စံညွှန်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
တို့ကကမကထပြု Radiopublic: နှင့်ကဲ့သို့သောအစည်းအဝေးများနှင့်အတူ
သင့်ရဲ့ podcasts ကြီးထွားလာ (နှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန!) အီးမေးလ်စျေးကွက် & Automation အသုံးပြုခြင်း
ခက်စကားဝိုင်းများ၏အနုပညာ: အဘယ်ကြောင့် Podcasts အဆိုပါ သာ. ကောင်း၏သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံရေးပြောင်းနည်းနိုင်သလား
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, Market ကနှင့်တိုင်ဒါကအချိန်ပြည့်ယောဘသည်အလုပ်လုပ်နေစဉ်သင့် Amazing Podcasts ကြီးထွား
အဆိုပါစျေးကွက်လမ်းကြောင်းထူးခြားတဲ့နှင့်မူရင်းအကြောင်းအရာဖန်တီးသောကြောင့်လည်းသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်မြှင့်တင်ရန်အဖြစ် Podcasts ဖြန့်ဝေနေကြသည်အရာကိုအတွက်သေချာညာဖက်ကလူညှိစေရန်ကူညီပေးပါမည်သာ Podcasts ကူညီပေးနေအပေါ်အဓိကထားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစျေးကွက်လမ်းကြောင်းမတက်ရောက် Podcasts ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံး Podcasts အချို့သူတို့ Podcast တခုကိုကြီးထွားကူညီဖို့အဖြစ်ဆိုရှယ်မီဒီယာ, အီးမေးလ်စျေးကွက်နှင့်နည်းပညာအသစ်ကိုသုံးပြီးကနေအထိနည်းစနစ်ကိုသင်ယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။
တို့ကကမကထပြု ထရီ Digitaဌနှင့်ကဲ့သို့သောအစည်းအဝေးများထည့်သွင်း:
Integrated, အထူးကမ်းလှမ်းချက်များ, ဝါသနာရှင် retention, အိုးအကြှနျုပျ၏!
Podcasts မှ Paid Get: အဆိုပါ Next ကို Frontier
ငွေရစေသောနည်းလမ်းကြောင်းသူတို့ကိုထိထိရောက်ရောက်စပွန်ဆာဆည်းပူးဖို့ဘယ်လိုပေါ်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများသင်ပေးကူညီဖို့အဖြစ်, podcasts သူတို့ရဲ့ယာဉ်ကနေအကျိုးမပေးနိုင်နိုငျပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်တဲ့သူကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်၎င်းတို့၏ podcasts တွေကို crowdfunding ၏သဘောသဘာဝ feature ပါလိမ့်မယ်။
တို့ကကမကထပြု နှုတ်ခမ်းနီ & ဗီနိုင်းထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အစည်းအဝေးများအပါအဝင်စဉ်:
တည်နေရာ, တည်နေရာ, တည်နေရာ! ကြည်း Up ကိုကနေပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုအပေါ်အစီရင်ခံ
ယုံကြည်သည်: ထဲမှာလိင် Assault အပေါ်အစီရင်ခံ #metoo ခေတ်
ရည်ရွယ်ချက်-Driven Podcasts: ပြောင်းလဲခြင်းကိုဖန်တီးရန်သင့် Voice ကိုနှင့်သင့်ကွန်ယက်အသုံးပြုခြင်း
အဆိုပါလူ့အဖွဲ့အစည်း, ယဉ်ကျေးမှု & Advocacy လမ်းကြောင်းအတူတူလာနှင့်အပြည့်အဝထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးရေးခွဲခြားမှု, မတူကွဲပြားမှုများနှင့်ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုအတွင်းအကြီးပြောင်းလဲမှုလိုအပ်ကြောင်းဆဲဖြစ်ကြောင်းနှောင့်ယှက်များစွာပုံစံများအဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စများပါဝင်ဖြေရှင်းရန်ရောနှောစပီနှင့်တက်ရောက်လာနှစ်ဦးစလုံးအားပေးဖို့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အရေးကြီးပါတယ်နှင့်ထည့်သွင်းအစည်းအဝေးများမှတဆင့်ပြုလုပ် podcasting ၏အနုပညာ သာ. ကြီးမြတ်လျူးကိုကူညီနိုငျကွောငျးအများအပြား underrepresented အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအများကြီးလိုအပ်တိုးတက်သောစကားသံကိုပေးစေခြင်းငှါအလုပ်မလုပ်အတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။
ငါ့ကိုသတိပွုပါ ကျေးဇူးပြု. အိုး ကျေးဇူးပြု. : အသံထူးအိမ်သင်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုဇာတ်ကြောင်းပြော
podcasting ၏အနုပညာအတွင်းအများဆုံးလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာအမျိုးအစားများအနက်အသံဒရာမာပုံစံ၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါကထူးခြားတဲ့လမ်းကြောင်းနှင့်၎င်း၏အစည်းအဝေးများအသံဒရာမာ၏အပြည့်အဝလမ်းကြောင်းမည်ဖြစ်သည်ပညာရေးအာရုံစူးစိုက်ခြင်း, ကအားလုံးကိုအမျိုးအစားများအနေဖြင့် Podcasts အဘို့ကြီးစွာသောသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကဖြစ်လိမ့်မည်!
ဤ ခုနစျပါးညီလာခံပုဒ် အညီအမျှသူတို့ကိုကူညီပါတယ်တန်ဖိုးရှိသောသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းပေးစဉ်အသစ်စက်စက် podcast အဖြစ်ထူးခြားတဲ့အနုပညာအသံတစ်အဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာအသိုင်းအဝိုင်းသည်အဘယ်အရာအတွက်တတ်နိုင်သမျှအများအပြား Podcasts ကိုစုသိမ်းရန်မစ်ရှင်ပေါ်မှာရှိသမျှနေသောအသံစစ်ပြန်များ၏ရေးစပ်ပါလိမ့်မည် podcast နှင့်အမျှလူသားအဖြစ်မပေါက်ပါဘူး။
အဆိုပါကွန်ဖရအချိန်ဇယားတစ်ခုအပြည့်အဝ layout ကိုအဘို့, ပြီးတော့ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့် PM19 အပေါ်ပိုပြီးအဘို့, ပြီးတော့ထုတ်စစ်ဆေး 2019.podcastmovement.com.
Bonneville ဆီယက်တဲလ် Media Group သို့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုသည်းခံ - သြဂုတ်လ 23, 2019
ATTO နယူးသိုလှောင်ဆက်သွယ်မှုထုတ်ကုန်များခင်းကျင်းပြပေးပါလိမ့်မည် @IBCShow - သြဂုတ်လ 21, 2019
Show ကိုနယူးယောက် NAB: စက်မှုပညာရှင်များသည်အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသောစုရုံးခြင်း - သြဂုတ်လ 21, 2019
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း FOR-တစ်ဦးက FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor NAB PM19 podcasts လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို က Ultra HD ဖိုရမ် မူကွဲစနစ်များ	2019-08-10
ယခင်: လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု International - မီဒီယာ & Advertising ကြော်ငြာ
နောက်တစ်ခု: ကို Creative International - ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ
ATTO နယူးသိုလှောင်ဆက်သွယ်မှုထုတ်ကုန်များခင်းကျင်းပြပေးပါလိမ့်မည် @IBCShow
Show ကိုနယူးယောက် NAB: စက်မှုပညာရှင်များသည်အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသောစုရုံးခြင်း
"Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ်" (4 ပုဒ်မ 2) ၏ရာသီ2အတွင်းပိုင်း
ရစ်ချတ်ဝီလျံ, သေမှာ 86: တစ်ဦးက Landmark အန်နီဂုဏ်ပြုခြင်း
ထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာ, နိုင်ငံတကာ / Co-အေဲ
တပ်ဦးအဆုံး Web Developer
ပုံနှိပ်ပါထုတ်လုပ်ရေးလက်ထောက် / ဒီဇိုင်နာ
Sr; ASIC ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ 1
ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ / မာလ်တီမီဒီယာရေးသားသူ